Good discussion of my friends regarding Rohingya Genocide | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ခေါင်းမြီးခြုံ လုံပါပေ့
ရိုဟင်ဂျာများအား နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးရန် တိုက်တွန်းထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ကုလတည်ပြု »
Good discussion of my friends regarding Rohingya Genocide
“ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ ဘုန်းကြီး တွေ က စစ်သားအစောင့်အရှောက်နဲ့ ဆွမ်းခံနေရတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ ဘင်္ဂလီ တွေ ကြောင့် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတွေက ဗမာလူမျိုး မပျောက်သွားအောင် မျိုးစောင့်ဥပဒေ ကို အကောင်အထည် ဖော်နေတာပါ” တဲ့…
မလေးလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်းအကြောင်းတော့ ကျွန်တော်သုံးသပ်ပြမနေတော့ပါဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
သေနတ်ကြီးတွေကိုင်ထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့ လက်တကမ်း အကွာအဝေးမှာ ဒုတ်ဓားလက်နက်တွေကိုင်ဆောင်ပြီး ပုဆိုးလှန်ဆဲနေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို အလှကြည့်ခိုင်းထားတာ လက်ရှိအာဏာရအစိုးရပါဗျ။
ရခိုင်အိမ်တွေကို မီးရှို့နေတာကို သေနတ်တချက်မဖောက်ဘဲ ရပ်ကြည့်ခိုင်းထားတာလဲ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ နဲ့ ဗဟိုအစိုးရပါဘဲ။
အဓိကရုဏ်း ကြီးမားလာအောင် တမင် အချိန်ပေးပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ကို ချနင်းခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့် ခေါင်းအေးအေးထားပြီး သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ status တွေအောက်မှာ comment ရေးရင် အမေ မွေးထဲက သဘာဝအလျှောက်ပါလာတဲ့ ခေါင်းလေးကိုတော့ အနည်းငယ် အသုံးချသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
U Kin, Mg Mg skw, Lat Yone Yee and my comments against the above post and Ko Melvin’s explanations.
Status ရှင်အနေနဲ့လည်း အမေ မွေးထဲက သဘာဝအလျှောက်ပါလာတဲ့ ခေါင်းလေးကို အနည်းငယ် အသုံးချ ဆင်ခြင်ရေးသားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်-
မဟုတ်မမှန် စွတ်စွဲ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံထားရတဲ့ သူတွေကို နောက်ထပ်မမှန်ကန်တဲ့ စွတ်စွဲ ချက်တွေလုပ်ရင် ပုဆိုးလှန်ပြတာထက် ပြင်းထန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာ ကိုလည်း စဉ်းစားမိဘို့ လိုသလို-
ရခိုင်ပြည်မှာ ဘယ်လူမျိုးပိုင်အိမ် အရေအတွက်ပိုပြီး မီးရှို့ခံရတယ်- ဘယ်လူမျိုး တွေ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ပိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ထင်ထင် ရှားရှား သိနေပါလျက် ရခိုင်အိမ်တွေကို မီးရှို့နေတာကို သေနတ်တချက်မဖောက်ဘဲ ရပ်ကြည့်တယ်-လို့ ပြောင်းပြန်ရေးထားတာကို အံ့သြမိပါရဲ့ဗျာ-
အမှန်တရား ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ အွန်လိုင်းမှာ အပြည့်ပါ-ကမ္ဘာကလည်း သိနေမြင်နေကြပါတယ်
Ko Ko Gyi>>>
Maung Maung Skw shared and rebutted correctly on STUPID RACIST Melvin Moe’s post.
Up to now…I respected Melvin Moe asafair minded, democratic good thinker cum writer.
But he just stand with the Myanmar Muslims BUT is INDIRECTLY supporting the GENOCIDE of ROHINGYA MUSLIM CITIZENS OF MYANMAR.
HIS bird-brain is too small to understand that Rohingya issue is played up and used by Myanmar Military Government and Rakhine Gov to trick the Rakhines.
Ko Melvin Moe I respect and admired most of your postings and had even
shared numerous times. BUT…Why are you writing the opposite facts. The
whole world knows the reverse. ” သေနတ်ကြီးတွေကိုင်ထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့
လက်တကမ်း အကွာအဝေးမှာ ဒုတ်ဓားလက်နက်တွေကိုင်ဆောင်ပြီး ပုဆိုးလှန်ဆဲနေတဲ့
ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို အလှကြည့်ခိုင်းထားတာ
အဓိကရုဏ်း ကြီးမားလာအောင် တမင် အချိန်ပေးပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ကို
ချနင်းခဲ့တာပါ။” I am ashamed of you. Never mind…you are very clever in
writing, I am not good in writing like you BUT I know the truth. U R
free to unfriend me or BLOCK me. With this, U may be recorded as the
person guilty of supporting the Rohingya GENOCIDE in the ICC cases. Be
CAREFUL FRIEND! Don’t be foolish.
Melvin Moe just rebutted me as “extremists”. He just wrote HALF TRUTHS or first half or initial stage of the ONGOING SLOW GENOCIDE of our cousin-brother Rohingyas. FYI there are about 212 Myanmar and Rakhine leaders EARMARKED for ICC Genocide indictment and Lt General Ko Ko, Home Minister, in-charge-of the Police forse is at the TOP of the list. IF he pulled Min Aung Hlaing, Thein Sein, Than Shwe so that his sentence could be reduced….it would beadood show. UN advised not to pull the top leaders first but to put in the waiting list. IT savvy FB and bloggers like Melvin should be careful not to side with the extremist criminals and refrain from justifying the Genocide as they could be also pulled to ICC.
U Aung Tin>>> ပုဆိုးလှန်ပြတာကုို အလှကြည့်နေခဲ့တာလောက်တင် မကပါဘူး။
အဲဒီလုို ပုဆုိုးလှန်ပြအောင်၊ ဆူပူမှုတွေ မဖြစ်ဖြစ်လာအောင်လည်း အဲဒီ
မဟာသူတော်ကောင်း ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေကဘဲ ဒလျှို ဒလန်တွေလွှတ်ပြီး
ဦး ကင်း>>> ကျနော်တို့ တွေ့ ဖူးတဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ ရခိုင်တွေက ရိုဟင်ဂျာအိမ်တွေကို
မီးရှို့ ဖို့ ရဲစခန်းမှာခွင့်ပြုမိန့် တောင်းနေတာကို
ရဲတွေကပြန်တောင်းပန်နေတာပါ…..Melvin Moe>>> မီးရှို့တဲ့ ဇာတ်လမ်းအစ ကတော့ ရခိုင်အိမ်တွေကို ခဲ နဲ့ ပေါက်ပြီး အိမ်တလုံးကိုမီးစရှို့တာဗျ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘင်္ဂလီအိမ်အမြောက်အများမီးရှို့ခံလိုက်ရသလို၊ ဒုက္ခသည် စခန်းရောက်ကုန်ကြရတယ်။
စစချင်း ထိန်းလိုက်ရင် ဒီလောက် အခြေအနေဆိုးသွားမှာမဟုတ်ဘူးMelvin Moe သေနတ်ဖောက်တဲ့ကိစ္စကို အထင်လွဲနေကြလို့ရှင်းပြအုံးမယ်။
လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး အကြမ်းဖက်မဲ့အသွင်အပြင်ရှိနေတဲ့လူအုပ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် သေနတ်ဖောက်ရမှာပါ။
သေနတ်ဖောက်တယ်ဆိုတာ သေနတ်နဲ့လူအုပ်ထဲပစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ မိုးပေါ်ထောင်ဖောက်တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပြီး လူစုခွဲရမှာပါ။
ခရီးသွားပြည်သူကို မဆီမဆိုင် အဆိုးရွားဆုံးသတ်ဖြတ်မှု့တွေလုပ်တော့ မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ စလွန်တာ ရခိုင်တွေပါ
Melvin Moe >>>
ကျွန်တော်ရေးတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သေသေချာချာမဖတ်ကြည့်ဘဲ ဒေါသထွက်နေရှာတဲ့
ရခိုင် လွန်တယ်။ ဘင်္ဂလီလွန်တယ် ဆိုတာမရှိဘူးဗျ ဦးကင်း ရ..
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု လုပ်တာကိုက မှားနေပြီ4hrs · Edited · Unlike · 7
ဦး ကင်း ဒါပဲလေ လွန်ရင် ဥပဒေဘောင်အတွင်းက အရေးယူလေ ခိုးဝင်ဆိုစီစစ်လေ လူသတ်ရင်ထောင်ချ
ဒါပေမဲ့ အကိုစရေးတာကိုက အစိုးရကိုဘုံရန်သူပြချင်ဇောနဲ
ရခိုင်တွေလွန်မလွန်တော့မသိဘူးဗျ ကမ္ဘာက ဂျီနိုဆိုက်လို
သေသေချာချာပြန်ဖတ်ကြည့်ဗျ။ ဘင်္ဂလီ တွေ ပုဆိုးလှန်ဆဲ နေတဲ့အချိန်တုန်းက အချိန်မှီထိန်းသိမ်းလို့ရသေးတယ်။
ကျွန်တော်ရေးထားတာရှင်းရှင်းလေးပါ4 hrs · Unlike · 4
Melvin Moe နောက်တခုက ဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး။
ဦး ကင်း>>> အကိုလက်မခံလည်းပြဿနာမရှိပါဘူး ဟားဗတ်တို့ အောက်စ်ဖို့ တို့ က ဆင်းတဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေက သတ်မှတ်တဲ့ ဂျီနိုဆိုက်ဗျ
ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာကို လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု့ပဲလို့ ထင်ထားလို့ လက်မခံတာလို့ ပဲထင်ပါတယ်
ဂျီနိုဆိုက်မှာ လူသတ်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခမျ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ
သုံးနှစ်လောက်နေပြီး ပညာမသင်ရတာလည်း ဂျီနိုဆိုက်ထဲမှာပါတယ်တဲ့ဗျာ
Melvin Moe >>> ဒါဆိုရင်လဲ အစိုးရ က ဂျီနိုဆိုက် ကို ကျူးလွန်နေတာပါ။ ရခိုင်တွေလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး
ဦး ကင်း >>>နစက က အဓိကနေရာမှာပါသလို ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေလည်းပါတယ်ဗျ ဘာလို့ လဲဆိုတော့
တောင်ကုတ်လူသတ်မှု့ကို နေ့ လည်ခင်းကြောင်တောင် ကျုးလွန်ထားတဲ့ရခိုင်တွေဟာ
နောက်ထပ် ထပ်မသတ်ပါဘူးလို့ အာမခံပေးလို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နုိုင်ပါဘူး
Melvin Moe >>>လူသတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ လူသတ်သမားတွေကို မဖမ်းတာလဲ အစိုးရ တာဝန်မကျေတာပါဘဲ
ဦး ကင်း >>>အဲဒါကိုအကိုသိသလို ရခိုင်တွေမသိဘူးဗျ သူတို့ ထင်နေတာကရခိုင်ပဋိပက္ခကို ဖန်တီးတာ
ဒေါ်စုလို့ တောင်ထင်နေပုံပဲ သူတို့ ကို တစ်ဖြေးဖြေးဆွဲယူရှင်းပြပေါ့ဗျာ
သူတို့ သာ အကိုတွေးသလိုတွေးခဲ့ရင် ၂၀၁၅ မှာ ရခိုင်မှာ ကြံ့ဖွံ့ အတွက်
Ko Yakhine >>> Melvin moe ရေ
အဲဒီတုန်းကသာ ထိန်းမရလို့ လူအုပ်ထဲကို ကုလား ဗမာမခွဲပဲ
Melvin Moe >>>တကယ်ဆို လူအုပ်ထဲ ပစ်စရာမလိုပါဘူးဗျာ။ ခေါင်းပေါ်က ကျည်တကတ် လောက်ကျော်ပစ်လိုက်ရင် ထိန်းသိမ်း လို့ရပါတယ်
Ko Yakhine>>> Sorry ကျွန်တော်လောကြီသွား
လို့ပါ စစ်အစိုးရရဲ့ ထိန်းသင့်တာကို
Lat Yone Yee >>>ကိုမိုးလဲ ….ကုလားမုန်းတီးရေးပဲခင်ဗျာ
Ko Ko Gyi >>>Yes…Lat Yone Yee …IF the Thai and UK people reacted as Rakhines react on its Muslims (Rohingyas, Kamans and Myanmar Muslims) …2 accused Rakhines would be sentenced to death or FORCED TO DO SUICIDE and ALL the Rakhines in Thai and UK would be assaulted. Now it is clear that they are not acting like the way Rakhines treated the Muslims in Rakhine.
Lat Yone Yee>>> ထပ်ပြောပါရစေ
Melvin Moe>>> ခင်ဗျားတို့ကလဲ တော်တော်လွဲတာဘဲဗျ..
တော်ပြီဗျာ.. ထင်ချင်သလိုသာထင်တော့. အပေါ်မှာလဲ ဆွေးနွေးထားပြီးပြီ… ထပ်ရှင်းပြမနေတော့ဘူး…
KKG>>>AT FIRST I wish to apologize tp Ko Melvin Moe…BUT because of his last paragraph…I also decided to do like that…Just ignore every thing whether anyone angry with me.
But I decided to copy and paste our conversation so that our friends could form their own opinion.
Zaw Tin ရိုဟင်တွေရဲ့အရှေ့ကရဲတွေ။အဲဒီ့ရဲတွေရဲ့အနောက်ကလက်နက်မျိုး
Nay Min ThuYa တဖက်သတ်ပါပဲ
ဒိမှာတော့ ဘင်ဂလီကြောင့် ၇ခိုင်ပြည်
Ko Ko Maung ရိုဟင်ဂျာတွေပုဆိုးလှန်ဆဲတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရကအရေးမယူပဲရပ်ကြည့်နေတာ ဟာပြဿနာကိုပိုမိုကြီးထွားစေတယ် လို့အကိုသုံးသပ်ထားတာကိုဖတ်လိုက် ရပါတယ်။ဂျာနယ်တွေမှာပါလာတဲ့ဓါတ် ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးသုံးသပ်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးကိုကျနော်သိသ လောက်ပြောပြပေးပါမယ်။သောကြာနေ့ ဝတ်ပြုမှုမှာမတရားသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ခရီး သွား ၁၀ ယောက်အတွက်ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပဖို့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ဟာအစိုးရ ကိုတရားဝင်စာတင်ပြီးခွင့်ပြုမိန့်ရယူခဲ့ပါ တယ်။ဆုတောင်းပွဲပြီးလို့ဗလီကထွက် လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဗလီရဲ့အိမ်သုံး လုံးကျော်ကတည်းခိုခန်းထဲကိုကြိုတင် ရောက်ရှိနေတဲ့(အစိုးရရဲ့လူဖြစ်ပုံရတဲ့) သူတွေဟာခဲနဲ့စထုခဲ့တာပါ။ဗလီကထွက် လာတဲ့လူငယ်တွေထဲကတချို့စိတ်မထိမ်နိုင်ပဲတချို့ခဲနဲ့ပြန်ထုကြပါတယ်။အဲ့ဒီလို လက်တုန့်ပြန်တာကိုအစိုးရအနေနဲ့ကြိုတင်ခေါ်ထားတဲ့သတင်းထောက်တွေက အမိအရဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေရိုက်အပြီးမှာတော့ ဗလီထဲမှာဝတ်ပြုမှုစတင်ကတည်းက ကြိုတင်ရောက်ရှိနေတဲ့လုံထိမ်းတွေဟာ လူအုပ်ထဲကိုတဲ့တဲ့ပဲစတင်ပြစ်ခတ်ပါ တယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပဲအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးဟာထိမ်းလို့မရတော့ပဲဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်သွားရတာပါ။အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ရင်လုံထိမ်းတွေ ကြိုရောက်နေတာသတင်းထောက်တွေ ကြိုရောက်နေတာဟာစနစ်တကျကြို တင်စီစဉ်ထားမှန်းသိသာပါတယ်ဗျာ။
Ko Ko Maung ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီလို့အကိုသုံးသွားလို့ပြောရအုံးမယ်။သမ္မတကြီးနဲ့ VOA သတင်းဌာန အင်တာဗျူးကိုအကိုနားမထောင်လိုက်ရ ဘူးထင်တယ်။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာသမ္မတ ကြီးပြောသွားတာက ကွင်းဆင်းလေ့လာ ကြည့်ရလောက်ကတော့ခိုးဝင်သူမရှိတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ဒါပေမယ့်ဟိုဒင်းတွေ ကလူဦးရေပေါက်ဖွားနှုန်းများတာကိုတွေ့ ရပါသတဲ့။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုကျနော် recording လုပ်ပြီးသိမ်းထားပါတယ်အ ကို။VOA မှာလည်းမှတ်တမ်းရှိမှာပါ။အဲ့ ဒီအင်တာဗျူးကိုပဲ Eleven မီဒီယာက ပြန်လည်ဖော်ပြရာမှာတော့သမ္မတကြီး ပြောတဲ့ခိုးဝင်သူမရှိဘူးဆိုတဲ့စာသားကို ဖြုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းမီဒီ ယာတွေရဲ့တဖက်သက် ရေးသားမှုတွေ ကြောင့်လူတော်တော်များများအမှန်တ ရားကိုမသိကြတော့ပါဘူး။နောက်တစ် ချက်ကလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတစ်ဖက် နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကအလုပ်အကိုင်မရှိတဲ့ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သောင်းနဲ့ချီပြီးဝင်ရောက်နေပါတယ်။ခိုးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရနဲ့အစွန်းရောက်တွေပူးပေါင်းပြီးတရားဝင်ခေါ်သွင်း နေတာပါ။ရိုဟင်ဂျာတွေဆီကသိမ်းယူထားတဲ့လယ်မြေတွေကိုသူတို့တွေကိုခွဲ ဝေပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားကဒ်ကိုင်ဆောင်ထား ကြသူတွေပါ။ဒါဟာပြဿနာတွေကိုပိုမို ရှုပ်ထွေးအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းတွေပါ။
This entry was posted on December 30, 2014 at 11:10 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.